M/weyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland oo ay wahiliyaan qeyb kamid ah Golaha Wasiirada ayaa booqday dakada weyn ee magaalada Kismaayo, Garoonka Diyaaradaha iyo Wasaarada Kaluumeysiga iyo Khayraadka badda.
by Editor · March 20th, 2017
Madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee Jubaland Mudane Maxamuud Sayid Aden oo ay wahiliyaan qeyb kamid ah Golaha Wasiirada ayaa maanta oo Isniin ah booqday dakada weyn ee magaalada Kismaayo, Garoonka Diyaaradaha iyo Wasaarada Kaluumeysiga iyo Khayraadka badda.
Sidoo kale madaxweynaha iyo waftigiisa waxey kormeeren gudiga Shaqada iyo Shaqaalaha kuwaa soo saaka bilaabay iney imtixaan ka qaadan dad kii soo codsaday Agaasimayaasha Guud ee Jubaland ku waa soo mudo badan la sugayey. Madaxweynaha ayaa kubooriyey gudiga iney si cadaalad ah oo eex la’aan ah ay u qaadan imtixaanka.
Madaxweynaha oo gabagabadii kormeerka saxaafada la hadlay ayaa aad u amaanay shaqalaha ka shaqeeya Garoonka Diyaaradaha iyo Dekadaba, asagoo ku amaanay sida hufnaanta leh eey shaqada u kala wadaan.